सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिद प्रकिया स्थगित गर्न लेखा समितिको निर्देशन | My News Nepal
काठमाडौं : सूचना तथा संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको अडियो प्रकरण समेत जोडिएको मुद्रण प्रेस खरिद प्रकिया तत्कालको लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले बिहीबार नै नेपाल सरकार सूचना तथा संचार मन्त्रालयका खरिदप्रकिया अगाडी नबढाउन निर्देशन दिएको छ।
नेकपाका सांसद विरोध खतिवडा, सूर्य पाठक, धर्मशिला चापागाईं लगायतका सदस्य र कांग्रेस सांसद डा. मिनेन्द्र रिजाल, राजेन्रद‍्र केसी लगायत खरिद प्रकियालाई रोकेर थप अनुसन्धानको माग गरेसँगै स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसबारे सञ्चार मन्त्रालय र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रतिनिधिहरुले दिएको जवाफमा समेत चित्त नबुझाएका सांसदहरुले गलत जवाफ दिएको भए कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिए ।
छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदी र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई बोलाइएको थियो । उनीहरुलाई सुरुमा लेखा समितिका सभापति भरत शाहले सरकारले प्राप्त गरेको प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषदका निर्णयमा थुप्रै अस्पष्टता रहेको भन्दै प्रश्नहरु राखेका थिए ।
अर्का सदस्य तथा पूर्वशहरी विकास मन्त्रीसमेत मोहम्मद इस्तियाक राईले सेक्युरिटी प्रेसको भवन निर्माणको लागत अस्वाभाविक रुपमा बढी राखिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले लागत अनुमान वस्तुगत नभएको बताउँदै भने, ‘भवन निर्माणका लागि प्रतिवर्गमिटर ६ हजार खर्च आउँछ, तर ३४ हजार लागत राखिएको छ, किन ? कि बमले हान्दा पनि नफुट्ने भवन हो ?
नेकपाका सांसद सूर्य पाठकले लेखा समितिका सदस्यहरुले समेत कमिसन खाएर सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न लागिएको भनेर एक व्यक्तिले आफूहरुको चरित्र हत्या गरेको भन्दै आपत्ती जनाए ।